Hutano, 01 Ndira 2017
Mumwe Mwana Ofa neChirwere cheTyphoid kuMbare
Apo vamwe vanhu vange vari kufara pazororo rekisimusi, imwe mhuri yekuMbare yakafirwa nemwasikana wayo uyo ano fungudzirwa kuti akarwara netyphoid kwenguva pfupi.
China Yobatsira Zimbabwe neMichina neMishonga yeKurapa Chirwere cheGomara
Mamwe madzimai ane chirwere chegomarara anoti vakawana mukana wekurapwa chirwere ichi pachena kuMbuya Nehanda Hospital paParirenyatwa. Izvi zvinotevera michina nemishonga yakauya navana Chiremba vakabva kuChina.
Gweta Rinorwira Kodzero dzeVanhu, Advocate Shumba Vorohwa Zvakaipisisa
VaMambeu vanoti kunyange hazvo nyaya ichiri mumaoko emapurisa, vanofunga kuti kurwiswa uku kune chekuita nezvematongerwo enyika kuburikidza nebasa rinoitwa naAdvocate Shumba rekurwira kodzero dzevana veZimbabwe.
Dutumupengo, Mafashamu, Zvoparadza Dzimba kuCabatsha kuBulawayo
Mhuri idzi dzinonzi dzave kutyirawo kuti dzimwe dzimba dzavo dzinogona kuwondomoka nekuda kwemamiriro adzaita mushure memvura iyi.
Vanhu Vanogara kuEpworth Votyira Hutano Hwavo
Vagari vemumusha weEpworth, uko kune matombo akaturikana, Balancing Rocks, vanoti kusavandudzwa kwenzvimbo yavo kuri kupa kuti hutano hwavo huve parumana nzombe.
Zvita 15, 2016
Nyika Yoyambira Pamusoro peMafashamu
Izvi zvinotevera mashoko echenjedzo apiwa neboka rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department ekuti mvura inogona kukonzera mafashamu icharamba ichinaya munyika yose kubva musi wa 14 Zvita kusvika musi wa 22 Zvita.
Vakawanda Vanoti Homwe yeHutano Ichavaremera
Vanhu vakawanda vari kutambaira zvakasiyana siyana hurongwa hwehurumende hwekuumba homwe yezvehutano, kana kuti Health Fund Levy, iyo ichange ichibva kumitero inobatirwa pamari inoshandiswa kutenga airtime yenharembozha.
Vechidiki Votaura Pamusoro peHIV/AIDS
Vechidiki vakazvarwa vaine hutachiona vanoti kunyange hazvo vachitambira zvavari, vanoti munzvimbo dzavanogara vachiri kusemwa zvakanyanya